एसिड पीडित सीमाको आक्रोश- के महिला भएर जन्मलिनु पाप हो ? - Arghakhanchi Saptahik
एसिड पीडित सीमाको आक्रोश- के महिला भएर जन्मलिनु पाप हो ?
एसिड पीडित सीमा बस्नेतले महिलाहरुमाथि एसिड आक्रमण भइरहँदा राज्यले आवश्यक कदम नचालेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् । शुक्रबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सीमाले के महिला भएर जन्मलिनु पाप हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।
‘म त तड्पी तड्पी जिउन बाध्य भए । अब भोलि
अरु दिदीबहिनीहरुले पनि मैले जस्तै पीडा भोग्दा राज्य टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्ने त होला,’ सीमाले आक्रोश पोखेकी छन् ।
यस्तो छ सीमाको स्टाटसः
कर्म सम्झिउ की दैबको लिला सम्झिउ मेरो भाग्यलाई । खाको बीस पो लाग्छ नखाको बीस लाग्यो मलाई त । नेपाली उखान्छ नि !
खानु न पिउनु पुर्पुरोमा चिनो । जस्लाई आज भोग्न बाध्य छु । मत तड्पी तड्पी जिउन बाध्य भए । अब भोलि अरु दिदीबहिनीहरुले पनि मैले जस्तै पीडा भोक्दा राज्य टुलुटुलु रमिता हेरेर बस्ने त होला । त्यो एसिडको जलन जसलाई मैले महसुस गरेकी छु ।
त्यो जलन, त्यो पीडा, त्यो रुवाई आज पनि आँखाको वरिपरि घुमिरहन्छ । मैले यो दुःखद घटनाको कल्पना पनि गरेकी थिइन, कल्पना पनि गर्न सक्दिन थे, जसललाई भुल्न सकिन म । कता कता मन चस्स घोचेर आउँछ । नेपालमा त महिला भएर जन्म लिएर मैले धेरै ठूलो भुल गरिछु जस्तै लाग्छ । यो नेपाली समाज त पुरुष बर्गहरुको लागि मात्र रहेछ जस्तो लाग्छ ।
हैन भने किन महिलालाई मात्र तड्पी तड्पी बाच्न बाध्य बनाउछ यो समाजले, यो नेपालको कानुनले ? के महिला भएर जन्मलिनु पाप हो र ? आखिर महिला पनि त यो समाजको एक हिस्सा हो उसले पनि त यो समाजमा स्वतन्त्र रुपमा बाच्न पाउनु पर्छ । यहाँ कसैले कसैलाई पनि रुप कुरुप बनाइदिने, अपांग बनाइदिने र ज्यान मार्ने अधिकार कसैलाइ पनि छैन ।दैनिक नेपालकाे सहयाेगमा Loading...